Masvirirwo Andakaitwa Mamiriyoni emadhora eB2B Bhizinesi Ine LinkedIn Vhidhiyo | Martech Zone
Vhidhiyo yakanyatso kuwana nzvimbo yayo seimwe yeanokosha maturusi ekushandisa, ane 85% yebhizimisi kushandisa vhidhiyo kuzadzisa yavo yekushambadzira zvinangwa. Kana isu tikangotarisa kushambadzira kweB2B, 87% yevatengesi vevhidhiyo vakatsanangura LinkedIn seyakashanda chiteshi yekuvandudza shanduko yemitengo.
Kana B2B vanamuzvinabhizimusi vasiri kushandisa mukana uyu, vari kurasikirwa zvakanyanya. Nekuvaka yangu yega yekumaka nzira yakanangana neLinkedIn vhidhiyo, ini ndakakwanisa kukura bhizinesi rangu kusvika pamusoro pemiriyoni yemadhora pasina mari.
Kugadzira vhidhiyo inoshanda yeLinkedIn inopfuura zvinopfuura zviyero kushambadzira vhidhiyo kuraira. LinkedIn mavhidhiyo anofanirwa kugadzirwa uye kugadziridzwa zvakanangana nepuratifomu kuitira kuti usvike kune chaiko vateereri uye uite chaicho chiitiko.
Izvi ndizvo zvandakadzidza (uye izvo zvandinoshuvira dai ndaiziva) nezve kushandisa LinkedIn vhidhiyo kuvaka B2B kambani.
Ndakazvipira kukwidza yangu LinkedIn vhidhiyo mutambo anenge makore maviri apfuura. Ini ndanga ndatsamwiswa nekugadzira mavhidhiyo ezvinyorwa zvekambani, asi kushambadzira kwangu chaiko kwaive kutsva kwandiri. Ini ndanga ndichifunga kugadzira LinkedIn mavhidhiyo anodikanwa akamira neakakwana mamiriro pamberi pebhodhi uye kubuda (zvakanyorwa zvakajeka) ruzivo rwekushambadzira. Ini ndakachinja zano rangu ndikatanga kugadzira mamwe mavhidhiyo akasarudzika ndichingotaura nezve zvikamu zveindasitiri izvo zvandinoziva uye zvandinoda.
Panzvimbo pekuisa pfungwa pakutengesa bhizinesi rangu, ndakafunga nezvekuunza zvakakomba kukosha kune vateereri vangu. Ndakaenderera mberi nekugadzira mamwe mavhidhiyo, ndichizvimisikidza semudzidzi wezvekushambadzira, bhizinesi, manejimendi uye kuita bhizimusi. Kuburikidza nekutumira kusingachinjiki uye nekudyidzana nguva dzose, ini ndakakura vateereri vangu zvakanyanya pamwedzi mishoma inotevera: ikozvino yasvika 70,000 vateveri!
Yangu vhidhiyo zano pivot (uye kuda kwangu kuwana zvishoma zvemunhu) zvakabhadharwa muchimiro chematani emitambo mitsva. Nekuzviisa kunze uko uye kutaura nezve hupenyu hwangu, vanhu vanosvika pakundiziva, vanosvika kana vachifunga kuti vakakodzera kushanda nesu, uye maitiro ekutengesa anofambisa mheni nekukurumidza. Panguva iyo tarisiro iyi yeLinkedIn yakatanga kushanyira webhusaiti yekambani yangu kana kusvika kwandiri, ivo vaive vatove kudziya mafambiro. Parizvino, kambani yangu yakasaina mari inodarika miriyoni yemadhora muzvibvumirano kubva kunongedzo dzinobva kuLinkedIn.
Kunyange ini ndine rubatsiro kubva kuchikwata chinonakidza chinosimudzira iwo anotungamira, chizvarwa chinotungamira idanho rekutanga rakakura-uye rinoda yakasimba LinkedIn vhidhiyo zano.
Kutaura Kutaura Kwenyaya
LinkedIn mavhidhiyo inzira yakanaka yekuudza zvinomanikidza, zvinoonekwa nyaya nezve rako chairo uye bhizinesi rako. Kunyange mafomu ese ari maviri akanaka, iwe kazhinji unotaurisa zvakanyanya pamusoro pechiratidzo chako muvhidhiyo kupfuura zvaungakwanise mune blog blog.
Iko kukosha kwevhidhiyo kuri mune izvo zvaunokwanisa kuratidza zvinooneka / zvinonzwika. Vhidhiyo inoita kuti vanhu vabatanidzane newe uye kunyange kusvika pakuziva iwe nekuti ivo vanogona kuunganidza ruzivo kubva kune yako muviri mutauro uye matauriro aunotaura. Vanhu vazhinji vanditaurira kuti vanonzwa kunge vari kutondiziva kubva pakuona mavhidhiyo andinogovana paLinkedIn.
Meseji imwecheteyo inogona kutambirwa zvakanyanya zvakasiyana paunonzwa matauriro emutauri nemanzwiro. Zvemagariro midhiya ndiyo epicenter yezvinyorwa zvinyorwa, asi vhidhiyo inonzwa ichokwadi. Vhidhiyo zvakare humanizes iyo "inosimbisa reel" iyo yemagariro media yave. Unofanirwa kuwana chakasvibira zvishoma, zvishoma chaicho kugovana vhidhiyo-chidzidzo chandakaramba ndichidzidza gore rapfuura ndichitora mavhidhiyo nevana vatatu vachidzidza kubva kumba kumashure.
Kukudziridza Vateereri Vako Vakanaka
Iwo iwo akanakisa maitiro isu atinoshandisa kune mamwe maratidziro nzira anoshanda pano, futi; izvo, kuti iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi nezvevateereri vako, uye unofanirwa kupa vanhu chikonzero chekutarisira.
Kunyangwe sekuda kwatinoita kufunga kuti kukanda mambure akawandisa kunogadzira zvakawanda zvinotungamira, tinoziva kuti hachisi chokwadi. Iwe unofanirwa kuve uine chinangwa nezvevateereri vako paunenge uchigadzira LinkedIn vhidhiyo. Uri kutaura naani? Ipo iwe uchifanira kugara uchinongedza zvemukati zvakanyorwa kune mumwe munhu, kuva nevateereri chaivo mupfungwa avo vauri kutaura navo uchiita firimu kuchakubatsira iwe kugadzira zvimwe zvinomanikidza zvemukati.
Paunenge iwe wasarudza uyo wauri kutaura naye, iwe unoda meseji inozoenderana. Iwe unoziva chii chaicho chisingazogadzike? Tsananguro yechigadzirwa chako kana sevhisi. Iwe unofanirwa kupa vanhu a chikonzero chekutarisira nezvekambani yako usati wataura nezvazvo. Tarisa pakugadzira zvemukati izvo zvinodzidzisa pasina zvishoma kutaurwa nezvekambani yako.
Usati watanga kutora mifananidzo, zvibvunze kuti:
Chii icho vateereri vangu vane hanya nacho?
Vateereri vangu vanonetseka nei?
Chii icho vateereri vangu chavanoda kudzidza nezvacho paLinkedIn?
Rangarira: kukudziridza vateereri hakuregi kana iwe uchirova 'Tumira.' Iwe zvakare unofanirwa kuvaka vateereri vako kumucheto kumashure nekudyidzana ne (uye kutora kufarira kwechokwadi mukati) kwako musika wekutarisa.
Kuti uve nechokwadi chekuti vateereri vavakatsanangura vanoona vhidhiyo yako, zvinobatsira kutanga wabatana. Chikwata changu neni tinoita izvi nekugadzira rondedzero yetarisiro muindasitiri yega yega uye tichivakoka kuti vabatanidze ma network kuitira kuti vagone kuona zvirimo mune zvavo zvekudya. Ivo vanogara vachiyeuchidzwa nezvechiratidzo chedu uye kukosha kwedu pasina isu kuti titengese zvakanyanya.
Kugadzira Yako LinkedIn Vhidhiyo Strategic
Wagadzirira kutanga kugadzira yako yega LinkedIn vhidhiyo kuvaka yako wega uye yekambani brand? Usadikitira — zviri nyore kuzviita Kutanga kupfuura iwe zvaunofunga.
Heano mamwe emazano andakadzidza nezvekugadzira inoshanda yeLinkedIn vhidhiyo pamusoro pemakore maviri apfuura- kusanganisira gumi gumi yekuvandudza vhidhiyo panguva yedenda:
Usanyanya kufunga nezvazvo. Ingo tendedza kamera uye upfure. Ini handitombo tarisa zvangu mavhidhiyo nekuti ini ndinosarudza ndoga.
Goverana zvinyorwa mangwanani. Iwe uchaona yakawanda yekubatana mangwanani kupfuura manheru.
Wedzera zvinyorwa. Vanhu vanogona kunge vachiona pafoni yavo kana kune vamwe, uye vangatoda kuverenga pane kuteerera. Ichowo chiitiko chinogoneka chepamusoro.
Wedzera musoro wenyaya. Paunenge uchiwedzera zvinyorwa zvidiki, wedzera musoro-wekubata kumusoro kune yako vhidhiyo
Wana wega. Zvangu zvinyorwa zvanyatsoita mushe zvave zvekutadza, kuratidza kufambira mberi nekubata mamiriro akaoma.
Iva wepakutanga. Ndakaedza kutumira mavhidhiyo akateedzana asi kuve nechimwe chinhu chitsva chekutaura (nemazita akasiyana uye zvigunwe) zvinonyanya kubata.
Wedzera nekopi. Vanhu vanogona kusatarisa yako yakazara vhidhiyo, uye ndizvo zvakanaka! Vape iwo chikonzero chekugara pane yako post uye voita nekuwedzera inomanikidza kopi.
Kuti ukure yako B2B brand uye ugare uchikwikwidza, unofanirwa kunge uchishandisa LinkedIn vhidhiyo. Saka vhara maziso ako uye svetukira mukati! Ukangotanga kutumira, hautende kuti hauna kurodha nekukurumidza.
Tevedzera Jackie Hermes pane LinkedIn
Tags: b2bb2b vhidhiyob2b vhidhiyo zanojackie hermesLinkedInlinkedin vateverilinkedin marketinglinkedin vhidhiyoukoshivhidhiyo kushambadziravisual storytelling